Achit Zone - Relationship Website In Myanmar
Relationship Website In Myanmar
ပျော်ရွှင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ ဒီလို အလေ့အကျင့်လေးတွေ ရှိကြပါတယ်
April 21, 2020 Cupid
လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာ ဒီလို အလေ့အကျင့်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့။ ဘယ်လို အမူအကျင့်လေးတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်… ၁။ အိပ်ရာ တူတူ ဝင်ကြတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်သူတွေဟာ နှစ်ယောက်လုံး အိပ်ချိန်တွေ တူအောင် သက်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အိပ်ပြီလို့ ပြောပြီး ညတွေမှာ Facebook မှာ active ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ ပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Achitzone.com ၂။ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ […]
ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးကိုသာ သင့်ရဲ့ အနာဂတ် ဇနီးလောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပါ
April 20, 2020 Cupid
အခုခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှာနေကြပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူ ကောင်မလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ လက်ထပ်လိုက်ပါတော့။ Achitzone.com ၁။ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးရင် ။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက လူတွေကိုတောင် ရူးသွပ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရထားရင် ကံကောင်းနေပြီလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ Achitzone.com အချစ်ဆိုတာဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ […]
တစ်ချို့စုံတွဲတွေ ချစ်လျှက်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ကြတာ ဘာလို့လဲ ?
April 19, 2020 Cupid
ချစ်သူရည်းစား နှစ်ယောက်အတွက် အချစ်တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုတာ အမြဲ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့စုံတွဲတွေ ချစ်သူတွေဟာ ချစ်လျှက်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုမရှိတော့ရင် ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နားလည်မှုမပါတဲ့ အချစ်ဟာ ရေမရှိတဲ့ ပန်းလေးလိုပါပဲ မကြာခင် ညှိုးနွမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ နားလည်မှုမပါတဲ့ အချစ်ဟာ ကြာရှည်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Achitzone.com နားလည်မှုမပါတဲ့ အချစ်ဟာ ရမ္မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နားလည်မှုဆိုတာကတော့ အချစ်ကိုပိုပြီး ခိုင်မြဲစေတဲ့အရာပါ။ တစ်ခြားတစ်ယောက်နေရာမှာ […]
LDRS ချစ်သူတွေ အနေဝေးတဲ့ ကာလကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့်သလဲ ?
April 18, 2020 Cupid
ချစ်သူနှစ်ဦး အနေဝေးနေပေမဲ့ အချစ်တွေ သွေးအေးမသွားအောင် ဒီအချက်လေးတွေ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ၁။ အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ စုံတွဲတော်တော်များများကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီလောက် ဆက်သွယ်နေရမှ ခိုင်မြဲမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတာက သူတို့ရဲ့ အကွာအဝေးကို နီးစေမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကတော့ အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်စေပြီး ပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ပျော်စရာလေးတွေဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ Achitzone.com ၂။ ဝေးနေရတာကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်လိုက်ပါ။ […]
Copyright © 2020 | Achit Zone